Ichi Chimwe Chinhu Chekutengesa Chingave chiri Kurasikirwa Kambani Yako $ 4 Mamiriyoni Pagore | Martech Zone
Isu tinowanzo taura nezvekutengesa nemari inoburitswa, asi kwete nekurasikirwa kana zvisiri kufamba zvakanaka. Kutengesa mutambo weropa kumakambani mazhinji uye zvinoita sekunge kushivirira kudiki mazuva ano kwevanotengesa kuwedzera, kuvaka hukama, uye kushandura vatengi. Iyo okutengesa maneja kunyangwe iine chinzvimbo chisingazivikanwe chekukurudzira uye kutyaira vashandi kusangana uye kudarika zvinangwa. Tora maneja asiriye mukati uye vashandi vese vekutengesa vanogona kubviswa. Ndakazvionera pakutanga-ruoko, ndichitarisa manejimendi ekutengesa anotarisa pane zvirevo, kupinda kwedata kana kusimudzira munhu anotyisa pakutengesa kune chinzvimbo kunze kwavo bailiwick.
Yekugonesa inogonesa tekinoroji chishandiso chekubatsira vako vekutengesa vashandi uye kugonesa kugona kwavo kufambisa zvakanyanya nekubudirira. Haifanirwe kunge ichisimudza zvipingaidzo, inofanirwa kunge iri kubvisa. Ndicho chimwe chikonzero nei tichida yedu Salesvue chikuva (anotsigira) zvakanyanya. Dashboard yavo kuSalesforce kune vese vatengesi vashandi uye manejimendi anoderedza zvakanyanya nguva iyo yekunyora, kuteedzera uye kurondedzera nezvekutengesa zviitiko.
Vazhinji mamaneja ekutengesa vanogashira zvishoma kune vasina rubatsiro rwekusimudzira kubva kumasangano avo. Asi, ivo vanotarisirwa kukunda matambudziko ezvese shanduko kuita manejimendi pamwe nekushanduka kubva mukutengesa zvigadzirwa kupa ruzivo rwekutengesa vega. Kune iwo masangano anoisa mari mumaneja avo, mazhinji anotadza kuisa mari zvine hungwaru kusimudzira hunyanzvi hunodiwa kuti maneja abudirire sezvinobvira. Izvi hazvingori nemhedzisiro huru kune mamaneja pachawo, asi zvakare zvinoita kuti vatengesi vasanyanya kushanda uye, pakupedzisira, zvinokuvadza pasi rekambani. Jessica Cash, Senior Director, Solution Development & Innovation yeECB Global.
Chinokosha ndechekuti maneja mumwe akatadza anogona kurasikirwa nekambani inodarika madhora mamirioni mana mukurasika kwekugadzirwa, kusarongeka kwechikwata manejimendi, kushomeka kwevatengi ruzivo, kutora vanhu, muhoro uye kudzidziswa. Heano kuputsika kwe kuti maManeja Ekutengesa anotadza sei.
Tags: manejimendi akashataBSNceb blogstadzakukanganisajessica cashmanejimendi mutengokutengesa dashibhodhiKugonesa Kugonesakutengesa utsanzikutengesa manejimendikutengesa manejimendi mutengokutengesa kwekutengesakutengesa kutsvagakutengesa kushumamari yekutengesaboka rekutengesakutengesa kudzidzisamuzvideo